I-veto kaGoogle kwiHuawei iyehla iitekhnoloji zetekhnoloji | Ezezimali
Iziphumo zesigqibo sikaGoogle sokuphula ubudlelwane kunye nophawu lwentengiso lwaseTshayina iHuawei zibangele inkxalabo enkulu phakathi kwabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ngenxa yempembelelo enokusetyenziswa leli nyathelo kwiimarike zezabelo. Okwangoku, onke amaxabiso obuchwephesha ehle kakhulu kumgangatho wokurhweba wamanye amazwe. Kunye ukuwa ngobundlobongela kwaye kwezinye iimeko bebephezulu kune-5%.
Ngaphandle kwento yokuba uHuawei uzamile ukuzola kwiimarike zezemali ngokuchaza kwingxelo yakhe ukuba "izakuqhubeka nokubonelela ngohlaziyo lokhuselo kwiimodeli ezikhoyo zolu phawu lwentengiso, zombini kwifomathi yefowuni ephathekayo kunye neepilisi." Nangona ingakhange ibe neziphumo ezolisayo ezinokulindeleka kwiimarike zezabelo. Ukuhlwayela amathandabuzo kwicandelo lobugcisa lamanye amazwe ukuba Ukohlwaywe ngokuqatha kwaye apho intengiso inyanzelisiwe ngekristale ecacileyo xa kuthengwa.
Kwisalathiso esikhethiweyo sezabelo zamazwe, i-Ibex 35, ukhuseleko lwezi mpawu aludweliswanga. Kodwa zichanekile kanye ezona zinxulumene kakhulu netekhnoloji entsha eyona yohlwaywa ekuqaleni kweveki. Apho ikhokelwe khona indra ukuba ngaphezulu kancinci kwi-5% kushiyeke kuqikelelo lwexabiso layo. Ngelixa abatyali zimali abancinci nabaphakathi bejonge elona xabiso liqhelekileyo lemveli ukuba babalekele kula maxesha. Ngaphaya kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko.
1 IHuawei inobunzima kumaxabiso ecandelo
2 Banokwenza ntoni abatyali mali?
3 Khetha amanye amacandelo esitokhwe
4 Lindela ukubuya kweeholide
5 Amaxabiso anokuzinza
6 Khusela izikhundla kwimarike yemasheya
IHuawei inobunzima kumaxabiso ecandelo
Isigqibo esenziwe nguGoogle sikhokelele ekunciphiseni ukwenziwa ngokubanzi kuzo zonke izitokhwe kwicandelo lobuchwepheshe. Ngaphandle kwayo nayiphi na imeko ngaphandle kwaye kwiimeko ezininzi ukwehla kwenye yeeseshoni zokurhweba ezibi kakhulu zonyaka. Apho isalathiso sobuchwephesha eUnited States, I-Nasdaq ishiywe malunga ne-2,50%, Ngelixa apha eSpain, i-Ibex 35 yehle ngaphezulu nje kwepesenti. Ukulindela into enokwenzeka kwiveki ephelileyo eya kuthi ichazwe zezi ndaba zichaphazelekayo ezikhokelele kwi-veto kaGoogle kaHuawei.
Iziphumo zesi sigqibo zidlulele ngaphaya kweemarike zezemali ze I-China kunye ne-United States. Ukufikelela kwinqanaba lokuba zichaphazele onke amaxabiso obuchwephesha kwihlabathi liphela. Ujongene nale meko, imali iye kwamanye amacandelo okuzikhusela kunye nokuzola. Umzekelo, umbane kunye neenkampani ezinxulumene nokutya. Ngale ndlela, kubalulekile ukuqaqambisa indima yeenkampani ezinje nge-Endesa, ethi ikwimeko engentle yemarike yemasheya iye yaxabisa malunga ne-0,20%. Kwiqhinga elicacileyo lotyalo-mali abalithathileyo ukukhusela imali yabo ekhoyo kwimarike yemasheya.
Ujongene nale meko iboniswe ngamaxabiso obuchwephesha kuzo zonke iimarike zamanye amazwe, okona kulungileyo abanokukwenza abatyali mali abancinci naphakathi engekho kwezi zindululo kutyalo-mali. Ubuncinci kwixesha elifutshane kunye nokubona indlela eya kubakho ngayo ukusukela ngoku. Ayothusi into yokuba ukungazinzi okuboniswe yile marike yestokhwe ngoku kubhengezwe kakhulu. Ilungele kakhulu ukwenza imisebenzi yorhwebo ngenxa yomahluko omkhulu phakathi kwamaxabiso aphezulu kunye neyona isezantsi. Ukuthatha inxaxheba kwezi ntshukumo kwiimarike ze-equity ngokukhawuleza okukhulu.
Ngelixa kwelinye icala, awungekhe ulibale ukuba icandelo leetekhnoloji yenye yezona zinto ziyingozi kakhulu kwimisebenzi eyenziwa ngabatyali zimali zentengiso. Apho unokufumana khona imali eninzi, kodwa ngenxa yesizathu esinye shiya i-euro eninzi endleleni. Ewe kunjalo, ayilo candelo lentengiso yesitokhwe elithozamisayo eliza kutyalomali ngalo mzuzu kanye. Kwaye kuncinci ukuphuhlisa imarike yesitokhwe ezinzileyo yexesha eliphakathi nelide, eyona njongo iphambili yabona batyalomali balondolozekayo. Banamanye amaxabiso afaneleke ngakumbi kwiprofayili yotyalo-mali.
Khetha amanye amacandelo esitokhwe
Ngenxa yemeko eboniswe zivenkile zeteknoloji kule veki, akukho mathandabuzo ukuba esinye sezona zicwangciso-qhinga zotyalo-mali kukujolisa kwamanye amacandelo angaphikisaniyo. Apho unokusebenzisa khona spike okanye bounce zezona ngxelo ziphambili zokulingana kumazwe aphesheya. Apho anokuvela khona amathuba oshishino lokwenyani ekufuneka ethathiwe ithuba ngabatyali zimali abancinci nabaphakathi. Nangona ngononophelo olukhulu ngaphambi kwento enokwenzeka ezingxoweni kwezi zihlandlo zichanekileyo.
Kwelinye icala, kufanele ukuba kuqatshelwe ukuba ixabiso kwicandelo lobuchwepheshe likwinqanaba elithile Ukugqithisa. Ngengqiqo, ukuba baye bafumana ukunyuka okunamandla kumaxabiso abo kule minyaka idlulileyo. Ukuya kwinqanaba lokuba uninzi lwabo bakwizikhundla eziphakamileyo zexesha lonke. Le nyaniso, malunga ne-veto kaGoogle kaHuawei, isenokuba sisizathu sokuqalisa izilungiso kwiimarike zezemali. Nangona kungaziwa ukuba ngawaphi amanqanaba angahamba nale ntshukumo inkulu yenziwe kwezi ntsuku.
Lindela ukubuya kweeholide
Ukuba nangasiphi na isizathu ufuna ukubekwa kwelinye lamaxabiso ecandelo lobuchwephesha, elona qhinga lililo ngeli xesha kukulinda ukubuya kwiiholide zehlobo ekudala zilindelwe. Ngaloo mihla sele ikhona iyakwaziwa ukuba ibe yeyiphi na inyani yeli nyathelo libalulekileyo kwizixhobo zeteknoloji. Ukuze ngale ndlela, abatyali mali abancinci nabaphakathi bathathe isigqibo sokuba bangene kwizikhundla zezi nkampani okanye ukuba, ngokuchaseneyo, kungcono ukuba ungabikho kwezi zikhundla. Kodwa ihlala ivela kwindlela yokucinga ethathela ingqalelo imeko ngokubanzi yeemarike zezabelo zamanye amazwe.
Kwelinye icala, ayinakulityalwa ukuba icandelo lezobuchwephesha alililo icandelo elibuthathaka kakhulu ukuba libonelele phezulu Izabelo kubanini zabelo. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, yintlawulo ebekelwe umda kuba iphantse yadlula i-3% kwezona meko zintle. Oko kukuthi, ayinaxabiso lokugcina, kodwa endaweni yoko kukwenza utyalomali lokuqikelela kunye nexesha elikhawulezayo. Nokuba iintshukumo ziphuhlisiwe kwiseshoni enye yorhwebo ngenxa yokungazinzi okunamandla kuqwalaselo lwamaxabiso abo. Eli licala ekungathandabuzekiyo ukuba kufuneka lithathelwe ingqalelo ukusukela ngoku ukuya phambili nangaphaya kokunye ukuqwalaselwa kwizicwangciso zotyalo mali.
Ngexesha elifutshane, kuyinyani ukuba ixabiso lecandelo lobuchwepheshe linokuzinza. Kodwa into ebalulekileyo yile inokwenzeka emva koko. Oko kukuthi, ukuqala kwiveki ezayo kwaye kuxhomekeke kwezinye izinto eziguquguqukayo, ezinje ngeziphumo zonyulo ze Unyulo lwaseYurophu. Ewe akusayi kuba sisigqibo esilula ukusenza ukusukela ngoku kwaye apho zininzi iimpazamo ezinokwenziwa kwisicwangciso esiza kwenziwa. Into enokwenzeka kuwe kule mihla inamaxesha athile kwaye inokukhokelela kwiimeko ezingafunekiyo kwimidla yakho yotyalo-mali.
Kule meko, kuya kwahluka kakhulu ukuba utyalo-mali lwakho lujolise kwixesha elifutshane okanye ukuba ngokuchaseneyo kujoliswe kwixesha eliphakathi nelide. Kungenxa yokuba akukho mathandabuzo okuba baya kufuna unyango olwahlukileyo kwisicwangciso oza kusenza ukusukela ngoku. Ngamanye amagama, igumbi lakho lokuhamba aliyi kuba phezulu kakhulu ngenxa yeempawu ezikhethekileyo zemeko kwiimarike zamashishini ezingenanzala emisiweyo. Ngobuphi ubungozi obukhulu kakhulu kwaye obunokukunika izitshixo malunga nento ekufuneka uyenzile okanye hayi ukususela ngoku.
Khusela izikhundla kwimarike yemasheya
Ngamafutshane, yimeko entsha evelayo yabatyali mali abancinci naphakathi kwaye baya kujongana nayo ngexesha yakha iphothifoliyo yakho elandelayo yotyalo-mali. Ngamanye amaxesha, ukutshintsha amaxabiso kwaye kwabanye kuguqulwe kuphela izindululo ezithile zentengiso yesitokhwe. Ukuze ngale ndlela, wenze imali oyigcinileyo izuze imali ngendlela efanelekileyo ngakumbi nangaphezulu kwayo yonke indlela yokuzikhusela kwimidla yakho. Kananjalo nokuhoya yonke into enokwenzeka kwisiqingatha sesibini sonyaka. Ngazo zonke iinguqu ezinokuvela kule meko ivelayo kule nxalenye yonyaka.
Apho ekugqibeleni imalunga nokuba unokuphucula ibhalansi yeakhawunti yakho yokonga kunyaka ngamnye wokurhweba. Ukwazi ngamaxesha onke ukuba izinto aziyi kuhlala zihamba njengoko unqwenela. Into ezakufuneka ukusukela ngoku ukuya phambili kuba utyalo-mali kwiimarike zezabelo azizukuba lula ukwenziwa. Ukuya kwinqanaba lokuba unokwenza impazamo engaqhelekanga.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » I-veto kaGoogle kaHuawei iwa phantsi kwezitokhwe zobuchwephesha